Khudbaddii Löfven uu ka jeediyay shir weynaha kolkii la doortay - Radio Sweden Somali - Raadiyaha Iswiidhen | Sveriges Radio
Khudbaddii Löfven uu ka jeediyay shir weynaha kolkii la doortay
La daabacay fredag 5 april 2013 kl 13.49
Is-bedel ayaa dhici doona kolka doorashada aan ku guuleeysanno
Qudbaddiisa dhab-tuska ee uu Stefan Löfven khamiistii ka jeediyay shir-weeynaha xisbiga Sooshiyaal-dimoqoraadiga u furmay maalintii arbacada, dabadeed kolkii si rasmi ah loogu doortay kursiga hoggaanka xisbiga oo uu si ku meel gaar ah horey ugu hayay muddo sannad ah ayuu ku sheegay inuu dhabbadii xisbiga wax ka badalay qaatayna fikirkii ey horaey u soo ban-dhigeen ururka dhallin-yarada ee xisbiga SSU iyo ururka shaqaalaha ee LO oo ahayd in loo xadeeyo dhallaanka shaqa-la'aanta ku sugan muddo 90 maalmood ah (saddex bilood) gudahood, waxa lagu magacaabo "ungdomsgaranti" dammaanad qaadidda dhallaanka, sidii ey ku heli lahaayeen shaqo ama tacliin, halka horey ay uga ahayd 180 maalmood.
- Xilligii dayrta waxaannu dejiney xadka ah 180 maalmood. Ururka SSU wuxuu sheegay in aannu sugi karin. Waxaan maanta leeyahay waad saxsaneydeen. Aniga qudheeydu ma sugi karo, sida uu sheegay.
Is-bedelka uu Löfveen kulanka kaga dhawaaqay ee 90-ka maalmood ayaa ahaa warkii ugu muhiim-sanaa ee uu khudbaddiisa ku soo ban-dhigay iyo in 180 maalmood loo soo yareeyo 90 maalmood. Halka uu gudoomiyaha ururka SSU Gabriel Wikström sheegay in saddexda bilood ee la dhimay ey hor-seedayaan farqi aad u ballaaran uuna aad ugu qanac-san yahay:
- Qof dhallin-yar waa muddo aad u dheer. Qaar badan ee dhallin-yarada ka mid ah ayaa toos uga yimaada dugsiyada sare tusaale ahaan. U baahan howl, aan helin. Middaasi waxay sabab u noqotaa inay kalsoonida shakhsigu hoos u dhacdo.
Dhimista 90-ka maalmood laga dhimey ballaan-qaadka hoowl-gelinta ee dhallin-yarada ayaa xisbiga ugu kici doonta dhaqaale gaarsiisan 2-3 bilyan oo koron. Dhammaan hoowlaha siyaasadda shaqa-la'aanta dhallin-yarada ee xisbiga ayaa ku kici doonta miisaaniyad gaarsiisan illaa iyo 7 bilyan oo koron. Dhambaalka ugu muhiim-sanaa ee uu Löfven khudbaddiisa uga gol lahaa ayaa la oran karaa iney ahayd siyaasadda sinnaanta, cunsuriyadda iyo shaqada, isagoona dhowr mar oo aan sidaa u badneyn jug yar hoosta u geliyay xisbiyada garabka midig ee ku xulufoobey hoggaanka dalka:
- Cidda iyadu aamin-san in xaaladda dhaqaale ee ammaan uu ku filan yahay sida ey hadda yihiin, oo meel u fariista hilib-shiil iyada oo xaaladda shaqa-la'aani heer sare ku sugan tahay, kuwaasi ku daahi maayaan xubin-nimada wasiir-nimo oo ey iminka hayaan, sida uu sheegay Löfven oo sifeeynayay kulan ey dhowaantan hogaamiyeyaasha afarta xisbiga ee garabka midig ku yeesheen gurigii ay ku soo barbaartay hogaamiyaha xisbiga Dhexe Annie Lööf, Koorv-ina ey ku shiisheen halkaasi.
Shir-weeynaha xisbiga Sooshiyaal-dimoqoraadiga ayaa maanta lagu go'aamin doonaa siyaasaddiisa la xiriirta macaashka adeegga bulshada. Waa su'aal ay ka taagan tahay dood aad u adag, iyada oo uu hoggaanka xisbigu geed dheer iyo mid gaabanba u fuulayo in aan wax laga bedelin fikirkiisa ah in aan la mamnuucin macaashka, iyadoona aey jiraan xubno si adag middaa uga soo hor-jeeda. Galab-nimadii shaleyto illaa iyo xalay ayey socdeen xodxodasho aad u ballaaran, halka uu xisbigu soo ban-dhigay qorshe dhexdhexaadin ah oo lagu adkeeyey goobo badan, qaasatan kolka laga hadleyo howlaha dhanka wax-barashada.
Qoraalkaa ayuu ku xusan yahay in awoodda ugu ballaaran la siiyey maamullada degmooyinka iyo sidii ey u hor-istaagi lahaayeen furitaanka iskuullada hor-seedi kara faqooqa ardayda ee dhanka tacliinta. Waa awood lagu siineyo degmooyinka iney codka diidmada ee Veto-ga saaraan, middaasina oo aaney maanta awood u lahayn.
Weli waxaan kala caddeeyn halka su'aashani caga-dhigan doonto iyo in dadyoowga ka soo hor-jeedaa aqbali doonaan qoraalka cusub ee hoggaanka xisbiga. Midda hubaasha ah waxay tahay in maanta cod loo qaadi doono sidii go'aan looga gaari lahaa:
- Waxaan rajeeynayaa in la helo qoraal dhaleeceeyn ballaaran ka soo jeedinaya oo ku jaheey-san fikirka ah macaash la'aan, sida uu sheegay Joakim Sandel, kana mid ah xubnaha xisbiga u matalaya gobolka Skåne, isla-markaana hogaaminaya xubnahaa isagoona ka gaabsaday inuu mowqifkiisa dhabta ah soo ban-dhigo.